Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Android
Android Iweghachite: Olee naghachi-ehichapụ faịlụ na Android
Nkuzi maka Olee naghachi-ehichapụ faịlụ na Android
1. Android File Iweghachite
2 Naghachi ehichapụ faịlụ
2.1 Naghachi Photos
2.2 Naghachi Ndi ana-akpo
Ma gụọ 2.3 Naghachi Text Ozi
2.4 Naghachi Videos
2.5 Naghachi Music
2.6 naputa site na SD Kaadị
Gam akporo igwe aghọwo akụkụ dị oké mkpa nke oge a nwoke ndụ kwa ụbọchị. Site na kọntaktsị na-memos ka kalenda, na ha nwere ya niile n'ime ha. Ndụ anyị na ya niile ibe n'ibe na iberibe gụnyere anyị nnọọ nke onwe oge na-anyị android ngwaọrụ. Ya mere, adịkwa data site na android ekwentị na-akpaghị aka pụtara na ị na-na maka otutu nke nsogbu na ụbọchị ndụ gị dị ka mma. Elekọta E nwere ọtụtụ ihe mere nke pụrụ iduga data ọnwụ na android ngwaọrụ. Kasị nkịtị n'etiti ndị a bụ:
Iji emehie bụ mmadụ; na anyị niile nwere ndị na oge mgbe anyị na-ezighị ma ọ bụ ọsọ ọsọ pịa bọtịnụ na anyị ekwesịghị nwere, adịkwa anyị niile data. Ọ nwere ike ma ịbụ ihe dị ntakịrị dị ka a mere "Hichapụ" nhọrọ ma ọ bụ ihe dị ka isi dị ka a factory nrụpụta.
Mgbe ụfọdụ a na-ezighị ezi android sistemụ nwekwara ike ịkpata oké data ọnwụ. The OS malfunction pụrụ ịbụ na e mere site ihe na onye ọrụ mere ma ọ bụ nwere ike ịbụ na a glitch na melite ma ọ bụ ihe yiri ya. Ma ụzọ, ị maara na ọ bụ ọjọọ mgbe ị hapụ a dum ọtụtụ nke data ozugbo.
Na-egbu maramara Custom ROMS
dịrị ihe android mgbe ọma adịghị ịkpata data ọnwụ. Ma na-egbu maramara omenala ROMs na na gbanyere mkpọrọgwụ android ekwentị, dabere n'elu ụzọ na i mere ya, nwere ike ịkpata ụfọdụ dị oké njọ data ọnwụ.
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ na Android
Ọ bụ a phenomena na ndị mmadụ na-amasị ka ihichapụ faịlụ na ha gam akporo igwe, ma efu ọzọ ohere maka ọhụrụ ihe ma ọ bụ dị nnọọ chọrọ wepụ na-achọghị ochie pesky data. Otú ọ dị, ọ bụ mgbe ahụ na mgbe nhichapụ, ha na-ahụ ha na-ehichapụ ụfọdụ dị mkpa faịlụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'otu ọnọdụ, ihe ị ga-eme ndị na-esonụ? -Ata ụta yourselft na-enye ruo weghachite ehichapụ faịlụ na gị android ngwaọrụ ọ bụla ọzọ? Atụla, ị nwere ike na-agbalị Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) naghachi ehichapụ faịlụ site na gị android ngwaọrụ.
Cheta na: Ị na-atụ anya ime 2 ihe mgbe ezighị ihichapụ faịlụ na gị android ngwaọrụ: 1) .Stop eji gị Android ngwaọrụ ozugbo. Ndị a na-ehichapụ faịlụ na-agaghị ma adị ebe na ngwaọrụ gị, na-eche ga ehichapu site ọhụrụ data. Ọ bụrụ na ị na-anọgide na-eji Android ngwaọrụ, mgbe ahụ, ọhụrụ data ga-eme. Na mgbe ahụ a ga-enweghị ohere iji naghachi ha ọ bụla ọzọ. 2). Chọta a na kọmputa, wụnye Wondershare Dr.Fone for Android,-adị njikere iji naghachi ehichapụ faịlụ na gị android ngwaọrụ.
Ụwa # 1 ngwa ngwa, dị mfe na mfe na-eji faịlụ mgbake software maka Android Devices
Nkwado mgbake nke multiple faịlụ na ụdị: photos, video, kọntaktị, ozi ederede, audio, akpọ akụkọ ihe mere, WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ, wdg
Export kọntaktị dị ka .VCF faịlụ, na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na mbubata kọntaktị azụ gị Android ekwentị ọzọ.
Export ozi ederede na WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme dị ka CVS, XML, HTML, wdg
-Arụ ọrụ maka 2000+ gam akporo ngwaọrụ, gụnyere Samsung, HTC, LG, Motorola, wdg
Nzọụkwụ 1. Gbaa usoro ihe omume na jikọọ na gị gam akporo ngwaọrụ
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone for Android gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Chere maka echichi mezue na ẹkedori software. Jikọọ ị android ngwaọrụ laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa site n'ọnụ eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Download na-agba ọsọ Wondershare MobileTrans
The USB debugging mode kwesịrị ka a nyeere na android ngwaọrụ na-ekwe ka Wondershare Dr.Fone mata na android ngwaọrụ.
Ka anya dị ka Wondershare Dr.Fone ghotara gị android ngwaọrụ a ákwà ga-apụta na-agwa gị na ngwaọrụ dị njikere na-scanned. Kụrụ "Ekem" n'ihu.
Nzọụkwụ 3. Họrọ faịlụ ụdị na gị Android mgbake
Bụrụ na nke a gbanyere mkpọrọgwụ android ekwentị, ị ga-mkpa nye Superuser ikike Wondershare Dr.Fone. Nanị pịa "Ka" mgbe mmapụta-egosi na gị na ihuenyo arịọ maka ikike.
Ekwentị ga-ugbu a njikere-scanned na Wondershare Dr.Fone ga-ajụ maka ụdị faịlụ na ị chọrọ iṅomi maka. Ego ma ọ bụ uncheck igbe dabere n'elu gị chọrọ.
Nzọụkwụ 4. iṅomi na-agbake furu efu gị Android ngwaọrụ
Na-esote na ihuenyo ga-abịa na-arịọ gị iji họrọ Doppler ụdị. The "Ọkọlọtọ mode" ga-ele anya ma na-ehichapụ faịlụ nakwa dị ka ndị ugbu a ugbu na ngwaọrụ gị. The "Advanced Mode" bụ n'ihi na mgbe Standard Mode naanị ezughị. Họrọ ọkọlọtọ mode n'ihi na ugbu a na kụrụ "Ekem".
Mgbe na-achọ faịlụ gị gam akporo ngwaọrụ, Wondershare Dr.Fone ga-egosipụta pụta dị ka e gosiri n'okpuru. Lelee ihe na ị chọrọ iji weghachi na see "Naghachi" button-esi na ha weghachiri eweghachi gị android ngwaọrụ.
Atụmatụ: Olee otú na-esi gị Android n'ime Iweghachite ọnọdụ
Dabere n'elu ụdị nke na ngwaọrụ na ị nwere, n'ebe na-ubé mgbanwe ụzọ ga-esi n'ime mgbake mode. Anyị ga-featuring ụzọ nke na-abanye mgbake mode na abụọ n'ime ndị kasị ama ụdị nke android ngwaọrụ.
Abanye mgbake mode na a Google Nexus ngwaọrụ
Jide Ike isi ma họrọ Ike anya. Mgbe ahụ Pịa ma jide Ike isi na olu ala isi. Ọ bụrụ na ị na-ahụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ android mascot, ị na-mgbake mode.
Abanye mgbake mode na a Samsung ngwaọrụ
Jide Ike isi ma họrọ Ike anya-emechi ngwaọrụ ala. Pịa ma jide Ike isi, olu elu isi, na Home button ọnụ. Hapụ mgbe ị na-ahụ Samsung logo.
Esi gị Android si Iweghachite ọnọdụ
Navigate mgbake mode nhọrọ na-eji ike elu na ike ala igodo aka ịchọta ndị "buut System Ugbu a," nhọrọ. Họrọ ya na-eji ike isi. Ngwaọrụ ga-ahapụ mgbake na ọnọdụ na Malitegharịa ekwentị ka nkịtị.
Olee otú naghachi faịlụ site Mobile ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos / Videos si HTC sensashion
Olee otú mmekọrịta Gmail Ndi ana-akpo ka Android
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Blackberry ka Samsung
Olee otú Zọpụta Facebook Ozi na Android
1 Pịa Nyefee Ndi ana-akpo si iOS ka Android 4.4, KitKat
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na HTC One
Best Android App Ọhazi maka Ị
Otú nyefee égwu ka Android
> Resource> Android> Android Iweghachite: Olee naghachi-ehichapụ faịlụ na Android